Madaxweynaha oo furey kalfadhigii ugu danbeeyey ee Baarlamaanka Federaalka ah ee Soomaaliya – Radio Daljir
Abriil 11, 2016 8:30 b 0
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaaliga ah ee Soomaaliya Xasan Shiikh Maxamuud ayaa maanta oo Isniin ah si rasmi ah u furey kalfadhiggii 8-aad ee Baarlamaanka Federaalka, kaas oo noqonaya kalfadhigii ugu danbeeyey ee Xildhibaanadu yeeshaan.
Madaxweyne Xasan oo khudbad ka jeediyey furitaankii kalfadhiga ayaa yiri:
“….Sidaad wada og tihiin waxaan ku guda jirnaa hannaanka dhismaha dowladnimada Soomaaliya, burburki nagu dhacay kadib. Waxaan Baarlamaanka ka codsanayaa inay waqti badan, juhdi badan iyo dulqaadba geliyaan hawlaha horyaalla kalfadhigan 8-aad ee xasaasiga ah. Waxaa mar dhow la idin soo gudbin doonaa natiijada ka soo baxda kulamada haatan Muqdisho inooga socda ee ku saabsan doorashooyinka. Waajibaadkiina inaad ka gudataan ayaan idin ka fadhinaa, idinkoo weliba eegaya duruufaha adag iyo marxaladda aan mareyno. Wixii aad u aragtaan inay sax tahay inaad nagu waafaqi doontaan ayaan filayaa, wixii aad u aragtaan inaan dib u wada saxnana diyaar baan idin nahay…”
Kalfadhigan oo loo adeegsan karo khilaaf cusub?
Kalfadhigan kadib ayaa waxaa lagu wadaa in xildhibaanada la kala diro, waxaana la soo dooran Xildhibaano cusub.
Madaxweynaha iyo Guddoomiyaha Baarlamaanka Prof. Jawaari ayaa wada qorshe ay caqabad uga dhigayaan go’aamadii ka soo baxay shirkii Garoowe oo inta badan maamul goboleedyadu soo dhaweeyeen, qorshahan ayaa ah in Jadwalka doorashada wax laga beddelo lana gaarsiiyo bilowga sanadka 2017, haddii kale hawsha gacanta loo golaliyo oday dhaqameedyada lana yareeyo awoodda maamul goboleedyada oo shirkii Garoowe siiyey awood.
Sida Madaxweynuhu ka codsadey Xildhibaanada waxaa loo soo gudbin natiijada shirka Muqdisho uga socda si ay u diidaan ama u yeelaan, tan oo ah mid aysan ku waafaqsaneyn Maamul goboleedyada gaar ahaan Koonfur Galbeed, Jubaland iyo Puntland.